Soo iibso budada isotretinoin (4759-48-2) Soosaaraha - Buyaas
Budada Isotretinoin waa nooc fiitamiin A. Waxay yareyneysaa qaddarka saliida ay sii daayaan qanjirrada saliida ee maqaarkaaga, waxayna ka caawineysaa maqaarkaaga inuu si dhakhso leh u cusbooneysiisto. Isotretinoin waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo finanka daran ee nodular-ka ee aan ka jawaabin daweynta kale, oo ay ku jirto antibiyootig.
budada isotretinoin (4759-48-2) fiidiyow
budada isotretinoin (4759-48-2) Smamnuucista
Product Name budada isotretinoin
Magaca Kiimikada Isotretinoin
Fasalka Daroogada retinoids
Molecular Wsideed 300.4g
Monoisotopic Mass 300.44 g / mol
barafku Psaliid 189-190 ° C
Boiling Point 462.8 ± 14.0 ° C ee 760 mmHg
Biological Life-Life Saacadaha 10-20
SOlubility Dhibaatada DMSO; ethanol
Application Isotretinoin waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo finanka daran ee nodular finanka (nooc gaar ah oo finanka daran) oo aan ka caawin daweynta kale, sida antibiyootig. Isotretinoin wuxuu ku jiraa fasal daawooyin loo yaqaan 'retinoids'. Waxay u shaqeysaa iyadoo ay ka gaabinayso soo saarista walxaha dabiiciga ah ee sababi kara finanka.
Waa maxay budada isotretinoin (4759-48-2)
Budada Isotretinoin oo sidoo kale loo yaqaan '13-cis-retinoic acid', waa daawo ugu horrayn loo isticmaalo daaweynta finanka daran. Marar dhif ah, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in looga hortago kansarka maqaarka qaar, iyo daaweynta kansarada kale. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo nooca loo yaqaan 'ichthyosis-eenlequin-ka-cudurka, cudur haragga ah oo badanaa dilaa ah, iyo lamellar ichthyosis. Waa retinoid, oo macnaheedu yahay inay la xiriirto fitamiin A, waxaana laga helaa tiro aad u yar oo dabiici ah jirka. Astaamaha loo yaqaan 'isomer', tretinoin, sidoo kale waa daawo fin-dillaac leh.
Sidee budada isotretinoin (4759-48-2) isticmaalka
Budada Isotretinoin waxaa marka hore loo isticmaalaa finanka daran ee cystic finanka iyo finanka ee aan ka jawaabin daweynta kale. Dhakhaatiir badan oo maqaarka ah ayaa waliba taageeraya adeegsiga daaweynta heerar ka hooseeya finanka kuwaasoo caddeeya u adkaysashada daaweynta kale, ama soo saarta nabarrada jidhka ama maskaxda. Isotretinoin looma tilmaamayn daaweynta cudurka finanka loo yaqaan 'prepubertal finanka' lagumana taliyaa carruurta kayar da'da 12 sano.
Waxa kale oo ay waxoogaa wax ku ool u tahay cudurka loo yaqaan 'hidradenitis suppurativa' iyo xaaladaha qaarkood ee rosacea daran. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu caawiyo daweynta 'inclusquin ichthyosis', lamellar ichthyosis waxaana loo adeegsaday kiisaska xeroderma pigmentosum si loo yareeyo keratoses. Isotretinoin waxaa loo isticmaalay in lagu daaweeyo cudurka fibrodysplasia ee aadka dhif u ah ossificans progressiva. Waxaa sidoo kale loo istcimaalaa daaweynta neuroblastoma, nooc kaansarka neerfayaasha.
Daaweynta loo yaqaan 'Isotretinoin therapy' ayaa sidoo kale la xaqiijiyay inay waxtar u leedahay ka hortagga burooyinka xubinta taranka ee tijaabada, laakiin dhif iyo naadir looma isticmaalo tilmaantan maadaama ay jiraan daaweyn waxtar badan leh. Isotretinoin waxaa laga yaabaa inuu matalo qaab dawladeed oo badbaado leh oo badbaado leh oo loogu talagalay daawada recalcitrant condylomata acuminata (RCA) ee makaanka afkiisa. Wadamada badankood daaweyntaan hadda lama aqbalo waxaana la isticmaalaa oo keliya haddii daaweyno kale ay ku guuldareystaan.
budada isotretinoin (4759-48-2) Qiyaasta
Daaweynta Isotretinoin waa in lagu bilaabaa qiyaasta 0.5 mg / kg / d ee toddobaadyada 4 oo loo kordhiyo sidii loo dulqaadan lahaa illaa xaddiga isugeynta ee 120-150 mg / kg. Wada shaqeynta steroids bilawga daaweynta ayaa laga yaabaa inay waxtar u yeelato xaaladaha daran si looga hortago bilowga inay ka sii darto. Bukaanka qaar waxay ka jawaabi karaan qiyaasta ka yar qiyaasta talo bixinta heerka. Qiyaasta hoose (0.25-0.4 mg / kg / d) waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah nadiifinta finanka sida qiyaasta sare ee la bixiyo isla muddadaas isla markaana leh qanacsanaanta weyn ee bukaanka. Si kastaba ha noqotee, faa iidada dib u soo kabashada dheer ma ahan sida weyn ee la mid ah daaweynta sida qaadashada caadiga ah. Jadwalka qaadashada hoose ee isku-darka ka gudba (1 wk / mo) ma aha kuwo wax ku ool ah.
Bukaanka qaar ayaa kaliya u baahan hal koorso oo ah isotretinoin afka ah si looga buuxiyo finanka, halka kuwa kalena ay u baahan yihiin koorsooyin dheeraad ah oo ah daaweynta isotretinoin. Daraasad ayaa lagu ogaaday in 38% bukaanku aysan lahayn finanka inta lagu gudajiray 3-sano oo dabagal ah, iyo, inta u dhexeysa bukaannada haray, 17% waxaa lagu xakameeyay daaweyn dheeri ah, 25% oo leh antibiyotik ah maqaarka iyo afka, iyo 20% oo leh koorsada labaad ee isotretinoin . Soo-kicintu waxay u badan tahay bukaannada da'da yar ama dumarka ah.
Soo iibso budada isotretinoin (4759-48-2) laga bilaabo Buyaas.com